Nomery 6 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
6 Hoy koa i Jehovah tamin’i Mosesy: 2 “Mitenena amin’ny zanak’Israely hoe: ‘Raha misy lehilahy na vehivavy manao voady manokana ho Nazirita+ eo anatrehan’i Jehovah, 3 dia tokony hifady divay sy zava-pisotro mahamamo izy. Tsy hisotro ny vinaingitra vita amin’ny divay na vita amin’ny zava-pisotro mahamamo+ izy, na hisotro ranon-javatra vita amin’ny voaloboka, na hihinana voaloboka lena na maina. 4 Tsy hihinana na inona na inona vita amin’ny voaloboka mihitsy izy, na voaloboka manta na ny hoditry ny voaloboka aza, amin’ny andro rehetra maha Nazirita azy. 5 “‘Tsy hokasihin-kareza ny lohany amin’ny andro rehetra anefany ny voadiny ho Nazirita.+ Mandra-pahatapitr’ireo andro anokanany tena ho an’i Jehovah, dia ho masina izy ka havelany ho lava ny volon-dohany.+ 6 Tsy mahazo manatona faty* izy+ amin’ny andro rehetra anokanany tena ho an’i Jehovah. 7 Tsy mahazo mandoto ny tenany izy, na dia amin’ny fatin’ny rainy na ny reniny na ny rahalahiny na ny anabaviny aza,+ satria ny volony lava no famantarana fa Nazirita eo anatrehan’Andriamaniny izy. 8 “‘Masina eo anatrehan’i Jehovah izy amin’ny andro rehetra maha Nazirita azy. 9 Fa raha misy olona maty tampoka kosa eo anilany+ ka voaloto izy, nefa mbola eo amin’ny lohany ny famantarana ny maha Nazirita azy, dia hoharatany+ ny lohany amin’ny andro hanekena azy ho madio. Amin’ny andro fahafito no hanaratany azy. 10 Amin’ny andro fahavalo kosa izy hitondra domohina roa na zana-boromailala roa any amin’ny mpisorona, eo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana.+ 11 Dia hataon’ny mpisorona fanatitra noho ny ota+ ny iray, fa ny iray kosa ho fanatitra dorana,+ mba handrakofana ny fahotan’ilay olona nanota noho izy nikasika faty.* Dia hanamasina ny lohany amin’io andro io ilay olona. 12 Ho Nazirita+ eo anatrehan’i Jehovah izy mandritra ireo andro maha Nazirita azy, ary hitondra ondrilahy kely tsy mihoatra ny herintaona izy ho fanatitra noho ny heloka.+ Tsy hisaina ireo andro teo aloha, satria nolotoiny ny maha Nazirita azy. 13 “‘Ary izao no lalàna momba ny Nazirita: Rehefa tapitra ireo andro maha Nazirita azy,+ dia hoentina eo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana izy. 14 Ary izao no hatolony ho fanatitra ho an’i Jehovah: Ondrilahy kely iray tsy misy kilema sady tsy mihoatra ny herintaona ho fanatitra dorana,+ sy ondrivavy kely iray tsy misy kilema sady tsy mihoatra ny herintaona ho fanatitra noho ny ota,+ sy ondrilahy iray tsy misy kilema ho sorona iombonana,+ 15 sy harona misy mofo boribory* vita amin’ny lafarinina tsara toto tsy misy lalivay+ sady nafangaro menaka,+ ary mofo fisaka tsy misy lalivay sady nohosorana menaka,+ mbamin’ny fanatitra varimbazaha+ sy ny fanatitra zava-pisotro+ ampiarahina amin’ireo. 16 Haterin’ny mpisorona eo anatrehan’i Jehovah ireo, ka hatolony ny fanatitra noho ny ota sy ny fanatitra dorana+ aterin’ilay olona. 17 Hatolony ho an’i Jehovah ho sorona iombonana+ ilay ondrilahy, miaraka amin’ilay harona misy mofo tsy nasiana lalivay. Ary hatolony koa ny fanatitra varimbazaha+ sy ny fanatitra zava-pisotro ampiarahina amin’ilay ondrilahy. 18 “‘Ary eo amin’ny fidirana amin’ny tranolay fihaonana no hanaratan’ilay+ Nazirita ny lohany, izay famantarana fa Nazirita izy. Dia halainy ilay volon-dohany maha Nazirita azy ka hataony ao anaty afo, eo ambanin’ilay sorona iombonana. 19 Ary halain’ny mpisorona ny sorok’ilay ondrilahy, dia ny sorony iray efa nandrahoina,+ ary koa ny mofo boribory* iray tsy misy lalivay avy ao anatin’ilay harona, mbamin’ny mofo fisaka+ iray tsy misy lalivay, ka hataony eo am-pelatanan’ilay Nazirita rehefa avy nasainy noharatana ilay famantarana ny maha Nazirita azy. 20 Dia hahetsiketsiky* ny mpisorona ho fanatitra ahetsiketsika eo anatrehan’i Jehovah ireo.+ Zava-masina ho an’ny mpisorona izany, miaraka amin’ny tratran’ilay+ ondrilahy atao fanatitra ahetsiketsika sy ny feny atao fanomezana.+ Mahazo misotro divay+ ilay Nazirita aorian’izany. 21 “‘Raha misy Nazirita+ mivoady fa hanao fanatitra ho an’i Jehovah araka izay ananany, ankoatra izay efa takina aminy, dia tokony hanefa ny voadiny izy. Izany no lalàna momba ny Nazirita.’” 22 Dia hoy i Jehovah tamin’i Mosesy: 23 “Lazao amin’i Arona sy ny zanany hoe: ‘Izao no tsodrano+ hataonareo amin’ny zanak’Israely: 24 “Hitahy anao+ sy hiaro anao+ anie i Jehovah! 25 Hampamirapiratra ny tavany aminao anie i Jehovah+ ka ho tsara fanahy aminao!+ 26 Hanandratra ny tavany aminao anie i Jehovah+ ka hanome anao fiadanana!”’+ 27 Ary hampiasa ny anarako+ eo amin’ny zanak’Israely izy ireo, mba hitahiako azy.”+
Izany hoe mandroso sy mihemotra mankany amin’ny alitara.